CAYAARAHA DALKA | Bakool.net | Page 2
Home / CAYAARAHA DALKA (page 2)
Natiijooyinka Kalamada Tartanka Dagmooyinka Gobolka Banaadir
07/09/2018	Leave a comment
Waxaa maanta la ciyaaray kulamo ka tirsan tartanka degmooyinka ee Gobolka Banaadir, waxaana la soo gabagabeyay Guruup-ka D, ay kuwada jireyn degmooyinka kala ah Wadajir, Cabdicasiis, Xamar weyne iyo Heliwaa, waxaa iskaga haray degmooyinka kala ah Heliwaa iyo Cabdicasiis, xili ay soo baxeyn degmooyinka kala ah Wadajir iyo Xamar Weyne. Degmooyinka kala ah Wadajir iyo Heliwaa ayaa galabta kuwada dheelay ...
Natiijooyinka Ciyaaraha Tartanka Dagmooyinka Gobolka Banaadir
Dagmooyinka Hodan iyo Shibis ayaa usoo gudbay wareega sideed dhamaadka ee tartanka Dagmooyinka Gobolka Banaadir. Waxaa wada ciyaaray Dagmooyinka X-Jajab iyo Warta Nabada kulanka ayaana kusoo dhamaday 1:1 ay kuheshiyeen labada dagmo. Labadaan dagmo ayaana ka haray tartanka dagmooyinka. Kulanka kale waxaa wada ciyaaray dagmooyinka Hodan iyo Shibis waxaana guul qaaday Dagmada Hodan ciyaar kusoo dhamaatay 2:1 . Labadaan dagmo ...
Maxay kusoo dhamadeen kulamadii xiisaha lahaa ee tartanka Dagmooyinka Gobolka Banaadir.
Waxaana la ciyaaray labo kulan oo qeeb ka ahaa tartanka dagmooyinka gobolka Banaadir gaar ahaan Group C. Dagmooyinka Kaaraan iyo Boondheere ayaa kuwada ciyaaray garoonka koonis ciyaar kusoo dhamaatay barabaro 1:1 ah. Labada dagmo ayaa markii hore ahaa isku dhibco isku goolal sharciga koobka uyaala ayaa ah hadii labo dagmo ay sidaas noqdaan in loo sameeyo qori tuur gudaha garoonka ...
Dagmada Dharkinley Oo Ganaax Garka Lo Galiyey
Dagmada Dharkenlay ayaa gaba ahaanba laga saaray tartanka dagmooyinka iyadoona laga ganaxay sidoo kale in sanadka danbe aysan ka soo qeeb gali karin . Ganaxan ayaa yimid sida la sheegay markii tageerayasha dagmada Dharkenly ay burburiyeen kuraasta garoonka jamacadaha . Dhibcihii kulankii shangani Iyo Dharkenlay Waxaa lagu wareejiyay dagmada shangaani oo hada rajo yeelatay halka kulanka u harsan dharkenly sedax ...
Kulamada Galabta Laga Ciyaarayo Tartanka Degmooyinka Gobalka Banaadir
Kulamadii ugu adkaa tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa galabta in lagu ciyaaro garoomada Koonis iyo Jaamacadaha oo ku Yaala caasimadda Muqdisho. Guruubka la is oranayay waxa uu noqon doonaa kan ugu horeeya ee lagu kala baxo ayaa lama filaan ku noqday kan ugu adag. Degmooyinka Deyniile iyo Howl Wadaag oo inta badan heerka guruubyada ku hari jiray ayaa ...
Kulamadii Galabta Laga Ciyaari lahaa Tartanka Degmooyinka Gobolka Banaadir Oo La Baajiyay
War goor dhaw ina soo gaaray ayaa sheegaya in la baajiyay labadii kullan ee galabta ka dhici lahaa garoomada Koonis iyo Jaamacadaha oo ku yaala caasimadda Muqdisho. Kaddib geeridii shalay Allaha u naxariistee Taageerihii degmada Yaqshiid Marxum C/Fitaax Muuse, ayaa maamulka Isboortiga gobolka Banaadir ay ku baajiyeen ciyaarihii galabta dhici lahaa. Askari illaalo ka hayay garoonka Koonis ayaa shalay rasaas ...
Kulamada Galabta Laga Ciyaarayo Tartanka Kubadda Cagta Degmooyinka Gobolka Banaadir
Maanta oo Talaado ah waxaan la ciyaari doona laba kulan waxaana ballansan degmooyinka Warta Nabadda iyo Xamar Jab Jab oo garoonka Jaamacadaha ku ciyaari doona iyo Hodan Vs Shibis oo Garoonka Banaadir foodda isku dari doona. Guruubkaan ayaa galabta la soo gaba gabayn doonaa, walina ma cadda degmadii kaalinta koowaad ku soo bixi lahayd. Shibis waxa ay xaqiijisay in ay ...
Tartanka Degmooyinka G/Banaadir Afar Degmo Do Ku Balansan Galabta Garoomada Jaamacadaha iyo Banaadir
Maanta oo Isniin ah waxaan la ciyaari doona laba kulan waxaana ballansan degmooyinka Yaaqshiid iyo Waaberi oo garoonka Jaamacadaha ku ciyaari doona iyo Shangaani Vs dharkenley oo Garoonka Banaadir foodda isku dari doona Yaqshiid ayaa kullankii ugu dambeeyay guul ka heshay Kaxda,halka Waabari iyana ay bar baro la dhaafi waysay Shangaani. Sido kale Shangaani oo laba dhibac ayaa wajahaysa Dharkeenley ...
Jadwalka Oo Isbadel ku yimid Tartanka Degmooyinka Kubadda Cagta Gobolka Banaadir Akhriso
Maamulka Isboortiga gobolka Banaadir ayaa isbadel ku sameeyay jadwalka tartanka, mahadaama la gaaray kullamadii u dambeeyay, waxaana laga cabsi qabaa in degmooyinka qaar ay is daayaan. Waa la baajiyay kullankii shalay dhex mari lahaa degmooyinka Yaqshiid iyo Waabari oo ku jira guruubka A,iyadoo laga dhigay galabta. Maalin walba waxaa dhici doona laba kullan,iyadoo ay wada ciyaari doonaan degmooyin hal guruub ...
Tartanka Degmooyika Gobalka Banaadir Wadajir iyo Xamar Wayne Oo Bareejo Ku Heshiiyay Sawirro
Iyadoo si xiiso leh ay garoomada kubadda cagta uga socdo tartanka kubadda cagta degmooyinka waxaa maanta wada ciyaaray Degmooyinka Xamar Wayne iyo Wadajir oo kuwada Jira Group D. Labada degmo ayaa soo bandhigay ciyaar xirfadeedu saraysay waxaana waqtigii loogu talo galay ay kusoo idlaatay 1-1 Xamar wayne oo goolka la hormartay waxaa daqiiqadi 30 u saxiixay laacibka No-11 Cabdiraxmaan Maxamed ...